Weerarkii lagu qaaday hotel Afrik oo lasoo afjaray iyo khasaaraha oo la shaaciyey - Caasimada Online
Home Warar Weerarkii lagu qaaday hotel Afrik oo lasoo afjaray iyo khasaaraha oo la...
Weerarkii lagu qaaday hotel Afrik oo lasoo afjaray iyo khasaaraha oo la shaaciyey
Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidamada Amniga Soomaaliya ayaa goor dhow soo afjaray weerarkii ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen hotelka Afrik, kadib sagaal saac oo uu dagaal ka dhex socday hotelka.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in inta la xaqiijiyay ay hotelka ku dhinteen 9 qof oo ay ka mid yihiin General Maxamed Nuur Galaal oo ku jiray hoteelka, iyo nin lagu magacaabi jiray Cabdullahi Nuure Siyaad oo ay walaalo ahaayeen siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad (Cabdi Waal). Waxaa sidoo kale ku dhintay askar iyo dad shacab ah.
Sagaalka qof ee dhintay ayaa waxaa ku jira 4 ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday, kuwaas oo ay dileen ciidamada amniga, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya.
Dhaawaca ayaa lagu warramay inuu ka badan yahay 10 qof, inta la og yahay illaa hadda.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Dhamme Sadiiq Aadan Cali (Doodisho) ayaa sheegay in dhimashada iyo dhaawacuba uu kordhi karo, balse inta la xaqiijiyay ay hadda tahay tiradaasi.
Saraakiil iyo odayaal ka tirsan beesha Ceyr ayaa markii uu weerarka dhacayey halkaas ku lahaa shir ay uga arrinsanayeen kiiska guddoomiyihii dhawaan la dilay ee degmada Hodan Allaha u naxariistee Cabdixakiin Dhegajuun.